Penguin 2.0: Afar Xaqiiqo oo Ay Tahay Inaad Ogaato | Martech Zone
Way dhacday. Iyada oo hal qoraal ah, Bixinta algorithm, iyo dhowr saacadood oo shaqeynaya, Penguin 2.0 ayaa la sii daayay. Internetku weligii sidiisii ​​ahaan maayo. Matt Cutts wuxuu daabacay qoraal kooban oo ku saabsan mowduuca May 22, 2013. Waa kuwan afar qodob oo muhiim ah oo ay tahay inaad ka ogaato Penguin 2.0
1. Penguin 2.0 wuxuu saameeyay 2.3% dhammaan weydiimaha Ingiriisiga iyo Mareykanka.
Ugu yaraan 2.3% ayaa kuugu dhawaaqi kara adiga lambar yar, maskaxda ku hay in ay jiraan qiyaastii 5 bilyan oo raadinta Google ah maalintii. 2.3% of 5 billion waa wax badan. Goob ganacsi oo keliya ayaa ku tiirsan 250 su'aalo kala duwan oo ku saabsan taraafikada iyo dakhliga. Saameyntu way ka weyn tahay tiro yar oo jajab tobanle ah oo laga yaabo inay soo jeediso.
Marka la barbardhigo, Penguin 1.0 wuxuu saameeyay 3.1% dhammaan boggaga internetka. Xusuusnow natiijooyinka musiibada ee taas?
2. Weydiimaha kale ee luqadda waxaa sidoo kale saameeya Penguin 2.0
In kasta oo inta badan su'aalaha Google lagu qabto Ingiriis, waxaa jira boqollaal milyan oo su'aalo ah oo lagu qabto luqado kale. Saameynta algorithmic ee Google waxay ku fidsan tahay luqadahaan kale, iyagoo kibosh weyn ka dhigaya webspam heer caalami ah. Luqadaha ayaa qallalaya boqolleyda sare ee webspam ayaa saameyn badan ku yeelan doona.
3. Algorithm-ka si weyn ayaa loo beddelay.
Waa muhiim inaad maskaxda ku hayso in Google gabi ahaanba leeyahay bedelay algorithm-ka Penguin 2.0. Kani maahan xog cusbooneysiin oo keliya, in kasta oo qorshaha magacaabista “2.0” uu ka dhigayo mid sidaas u dhawaaqaya. A algorithm cusub ayaa ka dhigan in qaar badan oo ka mid ah khiyaanooyinkii hore ee spammy aysan si fudud u shaqeyn doonin.
Sida iska cad, tani ma aha markii ugu horreysay ee aan la kulanno Penguin. Halkan waxaa ku yaal taariikhda dhibcaha dhibcaha ee Penguin.
Abriil 24, 2013: Penguin 1. Cusbooneysiintii ugu horeysay ee Penguin waxay timid Abriil 24, 2012, waxayna saameyn ku yeelatay in ka badan 3% weydiimaha.
May 26, 2013: Cusbooneysiinta Penguin. Bil ka dib, Google waxay cusbooneysiisay algorithm, taas oo saameyn ku yeelatay qayb ka mid ah weydiimaha, ku dhowaad 01%
Oktoobar 5, 2013: Cusbooneysiinta Penguin. Deyrtii 2012, Google ayaa mar kale cusbooneysiisay xogta. Markan qiyaastii 0.3% ee weydiimaha ayaa saameeyay.
Meey 22, 2013: Penguin 2.0 ayaa sii deysay, waxayna saameyneysaa 2.3% dhammaan weydiimaha.
Sida Cutts u sharraxay 2.0, “Waa jiil cusub oo algorithms ah. Soocelintii hore ee Penguin waxay asal ahaan fiirineysaa bogga guriga. Jiilka cusub ee Penguin aad ayuu uga qoto dheer yahay runtiina saameyn weyn ayuu ku leeyahay meelaha yaryar qaarkood. ”
Maamulayaasha websaydhada ee uu saameeyey Penguin waxay dareemi doonaan saameynta aad u adag, waxayna u badan tahay inay sidoo kale qaadan doonto waqti dheer si ay u soo kabato. Algorithm-kaani wuxuu u socdaa si qoto dheer, taasoo la micno ah in saameynteeda ay hoos ugu sii dhaceyso bog kasta oo xadgudub ku imaan kara.
4. Waxa jiri doona Penguins badan.
Ma aanan maqal kii ugu dambeeyay ee Penguin. Waxaan rajeyneynaa isbeddelo dheeri ah oo ku saabsan algorithm, sida Google ay ku sameysay isbeddel kasta oo algorithmic ah oo ay waligood sameeyeen. Algorithms waxay ku kobcaysaa jawiga webka ee isbeddelaya.
Matt Cutts ayaa xusay, "Waan hagaajin karnaa saameynta laakiin waxaan dooneynay inaan ku bilowno hal heer ka dibna waxaan wax ka badali karnaa sida ugu haboon." Mid ka mid ah faallooyinka boggiisa ayaa si gaar ah u weydiiyay haddii Google uu "u diidayo qiimaha kor u kacaya kuwa isku diraya," iyo Mr. Cutts ayaa ku jawaabay, "taasi waa ay imaanaysaa goor dambe."
Tani waxay soo jeedinaysaa adkeyn koror ah iyo, laga yaabee, xoogaa dabacsanaanta, saameynta Penguin 2.0 muddada bilaha soo socda.
Dad badan oo websaydhada iyo SEO-yada ah ayaa si macquul ah loogu jahwareersan yahay saameynta xun ee isbeddelada algorithm ee boggooda kale ee caafimaadka qaba. Maamulayaasha websaydhada qaarkood waxay ku yaalliin meelaha u gaarka ah ee ku dabaalanaya webspam. Waxay ku bixiyeen bilo ama sannado abuurista waxyaabo adag, dhisida xiriiriyeyaal awood sare leh, iyo farsameynta goob sharci ah. Hase yeeshe, markii la sii daayo algorithm cusub, waxay la kulmaan ganaaxyo, sidoo kale. Mid ka mid ah maamuleyaasha websaydhada yar ayaa ku calaacalay, "doqonimay igu ahayd inaan sanadkii ugu dambeeyay maalgashado dhisida hay'ad maamul?"
Qalbi qaboojinta, Cutts wuxuu qoray, "Waxaan haynaa waxyaabo soo socda xagaagan oo ay tahay inay ka caawiyaan nooca bogagga aad sheegayso, marka waxaan u maleynayaa inaad sameysay xulasho sax ah inaad ka shaqeyso dhismaha maamulka."
Waqti ka dib, algorithm ugu dambeyntii wuxuu la qabsadaa webspam. Weli waxaa jiri kara habab lagu ciyaaro nidaamka, laakiin ciyaaruhu waxay u imanayaan inay istaagaan marka Panda ama Penguin ay lugeeyaan garoonka kubbadda. Had iyo jeer way fiican tahay inaad adeecdo sharciyada ciyaarta.
Ma ku saameysay Penguin 2.0?
Hadaad yaabeyso inuu Penguin 2.0 ku saameeyay iyo in kale, waxaad sameyn kartaa falanqayntaada.
Hubi qiimeynta ereygaaga muhiimka ah. Haddii ay si weyn u diideen bilowgii Maajo 22, waxaa jira fursad wanaagsan oo ah in goobtaada ay saameyn ku yeelato.
Falanqeeyaan bogagga helay xiriirka ugu badan ee isku xirka dhismaha, tusaale ahaan boggaaga gurigaaga, bogga beddelaadda, bogga qaybta, ama bogga soo degitaanka. Haddii taraafikada si weyn hoos ugu dhacday, tani waxay calaamad u tahay saameynta Penguin 2.0.
Raadi wixii isbeddel ah ee suurtogalka ah ee kooxaha ereyada muhiimka ah halkii aad ka heli lahayd ereyo gaar ah oo keliya. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad darajo u yeelato "windows vps," marka loo eego falanqaynta ereyada muhiimka ah sida "windows vps hosting," "hel windows vps hosting," iyo keywords kale oo la mid ah.
Lasoco taraafikadaada qoto dheer oo ballaaran. Google Analytics waa saaxiibkaa intaad baraneyso bartaada, ka dibna ka soo kabaneyso wax saameyn ah. Fiiro gaar ah u yeelo boqolleyda taraafikada dabiiciga ah, oo sidaas ku samee dhammaan bogaggaaga waaweyn. Tusaale ahaan, soo ogow bogag leh tirada ugu badan ee taraafikada dabiiciga ah inta lagu gudajiray bishii Abriil 21-May 21. Kadib, raadi haddii lambarradan ay hoos udhaceen bilowgii May 22.
Su'aasha ugu dambeysa ma ahan "miyay wax igu noqotay," laakiin "maxaan sameeyaa hadda oo ay i saameysey?"
Haddii uu ku saameeyay Penguin 2.0, waa tan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso:
Sidee looga soo kabtaa Penguin 2.0
Tallaabada 1. Nasasho Way fiicnaan doontaa.
Tallaabada 2. Aqoonso oo ka saar boggaga spammy ama bogagga tayada-hooseeya ee boggaaga. Bog kasta oo ka mid ah boggaaga, weydii naftaada haddii ay runti siiso qiimo dadka isticmaala ama haddii ay badanaa u jiraan sida calafka mashiinka raadinta. Haddii jawaabta runta ah ay tahay tan dambe, markaa waa inaad kudartaa ama aad gebi ahaanba ka saartaa bartaada.
3 Step. Aqoonso oo ka saar xiriirinta spammy soo-galista. Si loo ogaado iskuxirayaasha hoos udhigi kara darajooyinkaaga oo kuu keenaya inaad saameyn ku yeelato Penguin 2.0, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso Hantidhawrka xogta soo gasho ee soo galaya (ama xirfadle uu kuu sameeyo). Ka dib markaad aqoonsatid xiriiriyaasha loo baahan yahay in laga saaro, iskuday inaad ka saarto adoo email u diraya maamulayaasha websaydhka oo si xushmad leh u waydiinaya inay ka saaraan isku xidhka websaydhkaaga. Ka dib markaad dhammeysato codsiyadaada ka saarista, hubi inaad sidoo kale ka takhalusto iyaga oo isticmaalaya Qalabka Google ee Disavow.
Tallaabada 4. Ka qaybgal olole dhisme xiriiriye cusub. Waxaad ubaahantahay inaad cadeyso Google in websaydhkaagu uqalmo darajada ugu sareysa natiijooyinka raadinta. Si aad sidaas u sameyso, waxaad u baahan doontaa xoogaa kalsooni ah oo lagu kalsoonaan karo oo laga helo dhinacyada saddexaad ee lagu kalsoonaan karo. Codbixiyayaashani waxay ku yimaadaan qaab xiriiriyeyaasha soo-galayaasha ee daabacayaasha kale ee Google ku kalsoon tahay. Tixraac kuwa daabacayaasha ah ee Google ay ku kala sarreeyaan natiijooyinka raadinta ee ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah oo aad kala xiriirto iyaga oo ku saabsan sameynta boostada martida.
Istaraatiijiyad adag oo SEO ah oo horay u socota ayaa diidi doonta inay aqbasho ama ku lug yeelato farsamooyinka koofiyadaha madow. Waxay aqoonsan doontaa iskuna dari doontaa 3 tiirarka SEO hab u soo kordhinaya qiimaha isticmaalayaasha isla markaana dejinaya kalsooni, kalsooni, iyo amar. Diirad saar waxyaalaha xoogga leh, oo kaliya la shaqee wakaaladaha SEO ee sumcadda leh rikoodh la caddeeyey oo ka caawinaya bogagga inay guuleystaan.
Tags: google +penguinqalin 2.0ayna search engineSEO